China Mpanamboatra serivisy fitsaboana banky tokana, mpanome, orinasa - teny nalaina - Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Home > Dokotera volafotsy Dokotera volafotsy > Serivisy fitsaboana banky tokana
Serivisy fitsaboana banky tokana, manohana ny famoahana karatra fanompoana, famerenana, fanendrena, fisoratana anarana, fandoavam-bola, fanontana lisitra, fanontana faktiora, fanontana tatitra momba ny diagnostika.
Model modely: fametrahana ny vokatra JAK-800A
Serivisy fitsaboana banky tokana, manohana ny famoahana karatra fandefasana tena, famerenam-bola, fanendrena, fisoratana anarana, fandoavam-bola, fanontana lisitra, fanontana faktiora, fanontana tatitra diagnostika.
JAK-800A toeram-pitsaboana miasa maro samihafa, ny endriny ankapobeny dia matotra sy malala-tanana. Afaka mamonjy amin'ny fomba mahomby ny efitrano malalaky ny hopitaly, nefa koa afaka mamonjy ny vidin'ny fividianana, hahatratrarana milina misy tanjona marobe. ny milina dia mihevitra ny asan'ny kaonty fanokafana sy fisokafana kaonty, fisoratana anarana, famandrihana, fandraisana isa, fandoavam-bola, fanontam-pirinty laboratoara, fanontana fampahalalana manokana ary fizarana serivisy momba ny boky momba ny kalandrie ara-pitsaboana, fanontana faktiora sy tombo-kase ho an'ny tenany, fanadihadiana sns.
Junankang "Yinyitong" rafitra fiandrasana tena, mampiasa ny haitao Internet of advanced indrindra, manome tolotra mety sy haingana ho an'ireo marary, manamaivana ireo olana ara-tsosialy malaza ankehitriny toy ny fahasarotan'ny fisoratana anarana, sarotra ny mahita dokotera, lava loatra ny fandoavam-bola ary fohy, afaka manatsara ny kalitaon'ny fitsaboana ara-pahasalamana, manatsara ny traikefa ara-pahasalaman'ny marary.
(1) mpampiantrano indostrialy (2) modely fampisehoana (3) efijery mikasika (4) modely fanontana karatra fandraharahana (5) mpamaky karatra ID (6) mpamaky karatra ara-pitsaboana (7) mpamaky karatra fiarovana ara-tsosialy (8) mpanonta voucher (9) mpandray vola (10) Masinina UnionPay POS (11) fitendry enina vy
(12) mpanonta takelaka fitsapana (13) fizarana rakitsoratra ara-pitsaboana (14) mpanonta faktiora (15) scanner barcode (16) modely fakan-tsary (17) milina fanamoriana (18) modely fanaraha-maso fahazavana fidirana (19) UPS famatsiana herinaratra (20) boaty herinaratra (21) audio (22) kabinetra lobi
1, maodely marobe, arakaraka ny filan'ny hopitaly, hanome vahaolana rindrambaiko sy rindrambaiko namboarina.
2, fametrahana kara-panondro, fanodinana orinasa, WeChat, fandoavam-bola an-tserasera Alipay, fiarovana azo antoka, mahomby sy mety.
3. Ny rafitra dia tsotra sy mety amin'ny fanaraha-maso kaonty, miaraka amina asa feno toy ny fanontana ny tatitra, ny antsipirian'ny fifampiraharahana, ny fangatahana ary ny fanondranana.
4. Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ny loharanom-pahalalana azo ampiasaina amin'ny rafitra sy ny fampahatsiahivana feo marani-tsaina.
5. Miorina amin'ny toe-javatra misy ny hopitaly amin'ny lalina, manomboka amin'ny bika mankany amin'ny interface, avy amin'ny hardware to function, hahatratrarana tena namboarina.
6. Ny lafiny ankavia sy havanana dia azo hitarina arakaraka ny tinady, izay afaka mahatsapa ny fiasan'ny olona telo amin'ny toerana voafetra ary manatsara kokoa ny tahan'ny fampiasana ireo loharano habaka amin'ny hopitaly.
7, ny fampiasana fampisehoana efijery roa, ny tampon'ny efijery fampisehoana, ny farany eo amin'ny efijery mikasika, manohana multi-touch, azo ampitahaina amin'ny telefaona marani-tsaina toa ny traikefa mikasika ny tsara.
Hot Tags: Fandraisana an-tsoratra ara-pahasalamana